China EAS Anti-Theft 4040mm RF Soft Label Supermarket-4040 Label abakhiqizi nabaphakeli | Etagtron
I-RF 4040 Soft Label Supermarket Security Alarm Sensor
Sebenzisa isitikha sokuphepha se-RF kuzimpahla lapho amathegi okuphepha ngenaliti engafaneleki.
②Kwezimpahla zazo zonke izilinganiso. Ngenxa yokulinganisa kwayo okungu-40 x 40 mm ilingana kalula ngisho nezindawo ezincane kakhulu.n
UseUkusetshenziswa kwesikhathi esisodwa. Isitika asisebenzi ngaphambi kokuthi sikhishwe esitolo.
I-EAS RF ethambile ithegi
I-0.5-2.0m (isuselwa kuSystem & enviornment esizeni)
Nude / Mhlophe / Ibhakhodi / Kwenziwe ngentando
Imininingwane eyinhloko yelebuli elithambile le-RF:
Amathegi we-1.Our angamaphepha amancane futhi ashumekwe ngaphansi kwelebula lakho langokwezifiso. Ngokubeka umaki ngaphansi kwelebula, asiphazamisi kusuka ekubekeni uphawu kwakho. Kukhona futhi nokonga ezindlekweni ozozithola ngokufakwa kwelebula nokuvikela ngasikhathi sinye.
Izinto ezinkulu zokuphepha zepulasitiki azivumelani nazo zonke izinto. Ngakho-ke isitikha sokuphepha siyisinqumo esingcono uma izinto okukhulunywa ngazo ngokwesibonelo:
izincwadi nezinto zokubhala;
amathuluzi nemishini yokuvikela;
imikhiqizo eyenziwe ngefilimu noma ngenjoloba;
♦Lo mkhiqizo usetshenziswa nohlelo lomsakazo i-RF8.2MHz futhi usetshenziswa kakhulu emashalofini ezitolo ezinkulu ukuvimbela ukwebiwa. Ilungele yonke imikhiqizo esemvelweni yezitolo ezinkulu nezitolo ezikhethekile. Ububanzi bokusetshenziswa kubandakanya amathegi entengo elenga izingubo, izincwadi, amabhokisi ama-CD alalelwayo namavidiyo, i-shampoo, amabhodlela wokuhlanza ubuso, nochungechunge lwemikhiqizo emincane yokupakisha ibhokisi
♦Lapho wenza i-degaussing, sebenzisa ithuluzi lokulwa nelebuli elenza ukwebiwa nelokubhangiswa kwe-degaussing. Sicela ungafaki ilebula elithambile endaweni lapho umkhiqizo uprintwa khona ngombhalo wencazelo obalulekile, njengokwakheka komkhiqizo, indlela yokusebenzisa, isitatimende sesixwayiso, usayizi nebhakhodi, usuku lokukhiqiza, njll. Ukuvimbela umuntu ukuthi asuse ilebula ngokungemthetho, lokhu ilebula linamathela ngokweqile. Uma ilebula isuswa ngenkani, umkhiqizo womkhiqizo uzolimala.
Langaphambilini Ukuphepha Kwezingubo AM 58KHz Amathegi we-Alarm Sensors Tag Tag-Acute Tag
Olandelayo: I-RF 8.2Mhz EAS Mini Tag Isikwele Esimnyama Nge-Pin Retail Security Tag-Mini Square
EAS Anti-Theft 4040mm RF Soft Label Isuphamakethe ...
RF 8.2Mhz EAS Mini Dome Tag Nge Pin nokudayisa Sec ...
I-RF 8.2Mhz EAS R50 Tag Enokuphepha Kwe-Pin Retail ...
RF 8.2Mhz EAS Middle Dome Tag Nge Pin nokudayisa S ...
Ukuphepha Tag Lab Deactivator Ukuze AM 58Khz EAS ...